The Winners (2020) | MM Movie Store
အခုလို ကိုဗဈကာလမှာ ပငျြးနကွေပွီလား။အပငျြးပွအေောငျ ဆနျးလညျးဆနျး ၊ ရယျစရာလဲကောငျးတဲ့ ဇာတျလမျးကောငျးလေးတဈပုဒျနဲ့ မိတျဆကျပေးပါ့မယျ။Comedy အမြိုးအစားဖွဈပွီး Chinese IMDBအရ Rating 6.8ရထားတဲ့ဇာတျကားတဈပုဒျဖွဈပါတယျ။
ရထားတဲ့ ratingနဲ့အညီ နောကျဆုံးအထိ ရယျလဲရယျရသလို မွုပျကှကျတှကေလဲ တကယျအံသွစရာကောငျးပါတယျ။အဓိကလူက ယနျဂငျြ။ ဂငျြဆိုတဲ့ စကားလုံးက တာဝနျသိတတျမှု၊ အလေးအနကျထားမှုနဲ့ အသေးစိတျကမြှုဆိုပွီ အဓိပ်ပါယျရတယျ။ ဒီလိုပါပဲ ယနျဂငျြတဈယောကျဟာလဲ နာမညျနဲ့အတူ တာဝနျကပြှေနျတယျ။
လုပျထုံးလုပျနညျးအတိုငျး တသှမေတိမျးသှားတယျ၊ စညျးစနဈကတြယျ။အဲ့လိုလူတဈယောကျဖွဈတဲ့ ယနျဂငျြဟာ တဈရကျမှာ စဈရေးလကေ့ငျြ့မှုတဈခုမှာ ဓားပွနရောသရုပျဆောငျဖို့ အကွောငျးဖနျလာပါလရေော။ ယနျဂငျြက ဘဏျဝနျထမျးတဈယောကျ၊ စဈရေးလကေ့ငျြမှုက ဘယျလိုလဲဆိုရငျ တကယျဘဏျကို ဓားပွအတိုကျခံရသလိုမြိုး လကေ့ငျြ့ရတာ။
ယနျဂငျြရဲ့ ဇာတျဆောငျနရောက…. ဓားပွ။ဘယျအရာမဆို အသေးစိတျကတြတျတဲ့ ယနျဂငျြကတော့ ထုံးစံအတိုငျး ဓားပွတိုကျဖို့ အစီအစဥျတှဆှေဲ၊ အကွံတှထေုတျ၊ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျတာပေါ့လေ။ ရဲတှကေတော့ ဒီတိုငျးပွီးသှားမှာပဲ ဆိုပွီး အလေးအနကျမထားကွဘူး။
ယနျဂငျြသူငယျခငျြးတှဆေို အလုပျစောစောဆငျးရတော့မယျဆိုပွီး ပြျောနကွေ။သူတို့မနေ့တောက…… ယနျဂငျြက ဘယျလိုလူစားမြိုးလဲဆိုတာပငျ။ဘယျအရာမဆို အလေးအနကျထားလုပျတတျတဲ့ ယနျဂငျြတဈယောကျ…. စဈရေးလကေ့ငျြ့မှုမှာ ဘယျလိုတှေ ကမောကျကမတှဖွေဈလဲဆိုတာ…..ရယျရယျမောမောနဲ့ ကွညျ့ရှုခံစားရမှာပါ။
တကယျ ရယျရတာဆိုတာ ဘာသာပွနျနရေငျး ရယျနမေိလို့ တျောတျောနဲ့မပွီးဘူး…….ရယျစရာကောငျးပွီး ပေါတောတော ကားကွီးလားလို့ မေးရငျတော့မှားသှားပွီ…. နောကျဆုံးပိုငျးကမြှ တကယျ ‘အျောအဲ့လိုကိုး’ ဆျိုပွီးဖွဈသှားရတဲ့အထိပါပဲ။ကိုတိကကြွီးယနျဂငျြရဲ့… ရဲတှကေို ဘယျလိုဒုက်ခပေးမလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျကွပါစို့လား
အခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာ ပျင်းနေကြပြီလား။အပျင်းပြေအောင် ဆန်းလည်းဆန်း ၊ ရယ်စရာလဲကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။Comedy အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Chinese IMDBအရ Rating 6.8ရထားတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရထားတဲ့ ratingနဲ့အညီ နောက်ဆုံးအထိ ရယ်လဲရယ်ရသလို မြုပ်ကွက်တွေကလဲ တကယ်အံသြစရာကောင်းပါတယ်။အဓိကလူက ယန်ဂျင်။ ဂျင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက တာဝန်သိတတ်မှု၊ အလေးအနက်ထားမှုနဲ့ အသေးစိတ်ကျမှုဆိုပြီ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ယန်ဂျင်တစ်ယောက်ဟာလဲ နာမည်နဲ့အတူ တာဝန်ကျေပွန်တယ်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း တသွေမတိမ်းသွားတယ်၊ စည်းစနစ်ကျတယ်။အဲ့လိုလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ယန်ဂျင်ဟာ တစ်ရက်မှာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုမှာ ဓားပြနေရာသရုပ်ဆောင်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါလေရော။ ယန်ဂျင်က ဘဏ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်၊ စစ်ရေးလေ့ကျင်မှုက ဘယ်လိုလဲဆိုရင် တကယ်ဘဏ်ကို ဓားပြအတိုက်ခံရသလိုမျိုး လေ့ကျင့်ရတာ။
ယန်ဂျင်ရဲ့ ဇာတ်ဆောင်နေရာက…. ဓားပြ။ဘယ်အရာမဆို အသေးစိတ်ကျတတ်တဲ့ ယန်ဂျင်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဓားပြတိုက်ဖို့ အစီအစဉ်တွေဆွဲ၊ အကြံတွေထုတ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်တာပေါ့လေ။ ရဲတွေကတော့ ဒီတိုင်းပြီးသွားမှာပဲ ဆိုပြီး အလေးအနက်မထားကြဘူး။
ယန်ဂျင်သူငယ်ချင်းတွေဆို အလုပ်စောစောဆင်းရတော့မယ်ဆိုပြီး ပျော်နေကြ။သူတို့မေ့နေတာက…… ယန်ဂျင်က ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာပင်။ဘယ်အရာမဆို အလေးအနက်ထားလုပ်တတ်တဲ့ ယန်ဂျင်တစ်ယောက်…. စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာ ဘယ်လိုတွေ ကမောက်ကမတွေဖြစ်လဲဆိုတာ…..ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။
တကယ် ရယ်ရတာဆိုတာ ဘာသာပြန်နေရင်း ရယ်နေမိလို့ တော်တော်နဲ့မပြီးဘူး…….ရယ်စရာကောင်းပြီး ပေါတောတော ကားကြီးလားလို့ မေးရင်တော့မှားသွားပြီ…. နောက်ဆုံးပိုင်းကျမှ တကယ် ‘အော်အဲ့လိုကိုး’ ဆ်ိုပြီးဖြစ်သွားရတဲ့အထိပါပဲ။ကိုတိကျကြီးယန်ဂျင်ရဲ့… ရဲတွေကို ဘယ်လိုဒုက္ခပေးမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြပါစို့လား